कथा | Kavyakunja
'कथा' वर्गका पोस्टहरू
त्यो विचरो !
-शुषमा मानन्धर आज बिदाको दिन । स्कूल जानु पर्ने कुनै हतार थिएन । चिया पिएर कौसीमा घामको आनन्द लिएर बढार्दै थिएँ । अरुबेला भागदौडको जिन्दगीमा फुर्सदिलो भएर ढँगले केही गर्न भ्याउने पनि होइन । त्यसो त , भन्नलाई म एक्लै छु । त्यतिविघ्न बितिहाल्ने काम के छ र भन्ने पनि लाग्न सक्छ तर आँखाले देखेजत्तिको […]
Categories: कथा | No Comments »
–किरण गजुरेल “हेल्लो ¤” “म रानो माहुरी हातमा नचाउँदै छु एक्कासी यादले छोप्यो ।” “कस्लाई खोज्नुभयो ?” “श्यामजी हुनुहुन्छ त ¤” “उहाँ त बाहिर गइसक्नु भयो, भरेमात्र फर्किनु होला ¤ केही छ भनिदिनुपर्ने ?” “भन्न त धेरै भन्नु छ, सायद उहाँलाई तपाईंले ती सबै प्रस्ट्याउनलाई गाह्रो होला । उहाँलाई नै भेट्दा भन्नुपर्ला ¤” “को बोल्दै […]
-परशु प्रधान -कथोपन्यास ऊ भर्खरै कोठाबाट निस्केर फेरि हात जोड्यो म जे भन्दैछु,, यहाँ र मेरो हितमा भन्दैछु । यहाँ र मेरो दुवैको जिन्दगी लामो छ । राम्ररी विचार गर्नुहोला । यौटा आँधी जस्तै ऊ आयो र यसरी नै गयो । म भने बाँध फुटेको पोखरी जस्तै भएँ । अब के कसो गर्ने हो ? […]
Categories: कथा |2Comments »
-सुमित्रा पौडेल ”आँचल” दुर्घटना भन्नु कुनै ठाउँमा ठक्कर खाएर शरीरमा लाग्ने चोट मात्र रहेनछ यो पनि जिन्दगीको ठुलो दुर्घटना रहेछ ! तर म बाँच्न सफल भएकि छु र मलाई बाँच्नु पनि छ …हिजो सम्म म मेरै जिन्दगीका कथा र व्यथाहरु मन भित्रै दबाएर आँशु र हाँसो लिएर खेल्दै थिएँ तर आज तिनैलाई भाषा या […]
-तिलकप्रसाद सापकोटा गंगा, चटक्क परेर आइछौ त ? जस्तोसुकै हुँ के चासो ? प्रशंसा गर्दा पनि रिसाउनुपर्छ ? जिस्काएको पनि कहीं प्रशंसा हुन्छ ? कहिलेकाहीं जिस्किनु स्वाभाविकै हो । अझ एउटै शाखामा बसेर सँगै काम गर्दा माया पनि लाग्छ नि । प¥या छैन माया गर्न । गणेशको केटीसँग जिस्किने बानी आजको होइन, विद्यालय पढ्दादेखिकै हो […]
-इन्दिरा प्रसाई “अहिले कस्तो छ तपाईंलाई ?” उनले फेरि पनि सोधेकी थिइन् । “म अहिले ठीक छु, धन्यवाद !” कामदेवले उत्तर दिएका थिए । पा“च घण्टाको उडानका क्रममा झन्डै पन्ध्र पटकभन्दा पनि बढी उनले कामदेवको चासो राखेकी थिइन् । प्रत्येक पन्ध्रबीस मिनेटमा उनी आइपुग्थिन्, कामदेवलाई निदाएको जस्तो देख्ता ˚र्केर पनि जान्थिन् । अधिकांश समय अन्तर्राष्ट्रिय […]
- शिव प्रकाश “तिम्रो एउटा बोलीले संसार परिवर्तन गर्न सक्छ । एउटा विचारले यो संसारलाई सुन्दर बनाउन सक्छ । हामी ईश्वरलाई गाली गर्छौ– ईश्वर निदायो भन्छौ तर उ निदाएको हैन, डराएको हो– मान्छेले विभत्स बनाएको संसार हेर्न नसकेर । आफैंले विभत्स बनाएको यो संसार हेरेर मान्छे अझै रमाइरहेका छ तर ईश्वर हेर्न डराइरहेछ । ” […]
Categories: कथा | 1 Comment »
-इन्दिरा प्रसाई क्याम्पसमा वादविवाद प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो । आज सँधै भन्दा ठूलो संख्यामा विद्यार्थीहरुको उपस्थिति थियो । आजको कार्यक्रममा प्राध्यापकहरुको पनि निकै ठूलो संख्यामा उपस्थिति देखेर सबै विद्यार्थी र कर्मचारी छक्क परेका थिए ।
-शिव प्रकाश केही दिन अघि तर धेरै दिन पछि शाम्भवीको फोन आयो । ” शार्दूल म बेलाबेलामा अतीतका ती फाँटमा त्यसैत्यसै डुल्न पुग्छु । हामीले टेकेका ती डोब टेक्दै हिड्छु अनि त्यहाँ त्यही तिमीलाई देख्छु । त्यही भएर आज पनि फोन गरेकी अर्थात तिमीलाई सम्झेर ।” मैले भने- “शाम्भवी तिमी र ममा यही फरक अझै […]
– केशु बिरही उसले जीवनमा कहिल्यै पनि अरुको अघि हात पसारेन । कुनै कुराको पनि याचना गरेन । उसले अरुलाई दिन मात्र जान्यो । लिन कहिल्यै पनि जानेन । जीवन भरी दान मात्र गरिरह्यो वाल्यकालमा होस या किशोरावस्थामा होस उसको कहिल्यै केही पनि डिमाण्ड थिएन । यस्तो भए खान्छु । उस्तो भए खाँदिन कहिल्यै पनि […]